အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေပါ | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
သင်ဘယ်မှာအလုပ်ရှာကိုသိရန်လိုအပ်သလား? ဘယ်မှာအလုပ်အခွင့်အလမ်းများရှာအွန်လိုင်းနှင့်သင့်ရပ်ရွာထဲတွင်သင်ယူပါ. အလုပ်ဖော်ပြချက်နားလည်ရန်မည်သို့မည်ပုံထွက်ရှာမည်.
သင်သည်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဆိုဆိုင်းဘုတ်များဘို့သင့်ကိုအနီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပြတင်းပေါက်ထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် "အကူအညီ Wanted ။ " ဒါကစီးပွားရေးန်ထမ်းရှာဖွေနေသည်ကိုဆိုလိုသည်.
တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်စင်တာမှာ sign up ပြုလုပ်
အားလုံးမြို့ကြီးများသငျသညျအလုပျကိုရှာကူညီအလုပ်အကိုင်စင်တာများရှိ. Find သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာ. သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သငျသညျပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီကိုလည်းသင်သည်သင်၏ပထမဆုံးအလုပ်ရှာကူညီပေးပါမည်. သူတို့သည်သင်၏ပထမဆုံးအလုပ်ရှာတွေ့ရန်သင့်အားကူညီပေးခဲ့သလိုလျှင်, သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်ရှာနေကြသည်သူတို့ကိုပြောပြနိုင်. သူတို့သည်နောက်တဖန်သင့်ကိုကူညီနိုင်မည်အကြောင်း.
အလုပျအတှကျအွန်လိုင်းရှာဖွေနေ၏အားသာချက်သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သင်ချင်တယ်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများအတိအကျမျိုးကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်. အလုပ်သုတေသန, တည်နေရာ, နှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနာရီ. သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာမရှိဘူးဆိုပါက, သငျသညျအများပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှာအခမဲ့ကွန်ပျူတာများကိုသုံးနိုင်သည်.
အလုပျအတှကျအွန်လိုင်းရှာနေကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. အသစ်လူတို့အဘို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင်လုပ်နိုင်သည် အခြေခံကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသင်ယူ ဒါမှမဟုတ်သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် FindHello သင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်မွို့၌ကွန်ပျူတာအတန်းများအတွက်.
သင်အွန်လိုင်းအလုပ်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်အသုံးပွုနိုငျအချို့ဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်. ဤအအလုပ်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးသင်သည်အလုပ်သတိပေးချက်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်အဘို့အ option ရှိသည်. သင်သည်သင်၏အီးမေးလိပ်စာရိုက်ထည့်လိုလျှင်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကျိုးစီးပွားသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာရရှိနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါသင် updates များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
တကယ်ပါပဲ သင့်ရဲ့မွို့၌အလုပ်တင်ခြင်းရှာကောင်းတစ်က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေရန်သင့်မြို့ Enter.
Idealist တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အကျိုးအမြတ်မယူအလုပ်အကိုင်များအများကြီးရှိပါတယ်. ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာတစ်ခါတစ်ရံသည်အခြားဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီလုပ်ဆောင်နေအလုပ်အကိုင်များရှာတှေ့နိုငျ, သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ဘာသာစကားပွောဆိုအထူးသဖြင့်လျှင်.
ဧရာမသတ္တဝါကြီး သငျသညျသစ်ကိုအလုပ်အကိုင်များစာရင်းအီးမေးလ်အပ်ဒိတ်များအတွက် sign up ကိုပေးနိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Monster ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ကူးက.
LinkedIn တို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားရန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသုံးနိုငျ. သင်လိုချင်သောခေါင်းစဉ်ရှာရန်နှင့်သင့်အရည်အချင်းများကိုက်ညီသောမည်သည့်အနေအထားလျှောက်ထား.
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်ကြောင်း LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုအောင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
CareerBuilder သငျသညျအလုပ်တင်ခြင်းဝင်ရောက်ဖို့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကြံဉာဏ်ကိုရနိုင်.
မှန်တံခါး သငျသညျအကျိုးစီးပွားသင့်ရဲ့လယ်ပြင်၌လတ်တလောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်. သငျသညျလစာအဖြစ်အလားအလာအလုပ်ရှင်များ၏သုံးသပ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များလည်းရှာဖွေနိုင်သည်.
USjobs သငျသညျပြည်နယ်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်သောနေရာ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အလုပ်နိုင်ငံသားအဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့မလျှောက်ထားမီတိုင်းပို့စ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ.
USAjobs အမေရိကန်နိုင်ငံသားရှိသူတို့အဘို့ဖြစ်၏. ဒါဟာဖက်ဒရယ်ဘို့အကောင်းတစ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် (အမေရိကန်အစိုးရ) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. သငျသညျကိုဝင်ရောက်အပေါင်းတို့နှင့်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အတင်အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ZipRecruiter သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသုံးနိုငျအခြားသယံဇာတဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, မူသောသင်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နောက်ခံနှင့်အကျိုးစီးပွားများပါဝင်သည်. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်လာတဲ့အခါသင် updates များကိုလက်ခံရရှိရန်ရှေးခယျြနိုငျ. ဒီလမ်း, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်လာ.
သငျသညျအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာအဖြစ်, သငျသညျအလုပျဖျောပွခကျြကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအလုပျအတှကျအကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်လျှင်သိရန်, သငျသညျအလုပျအတှကျအရည်အချင်းများကိုရှာဖွေချင်ပါလိမ့်မယ်.
ကဲ့သို့သောစကားလုံးများနှင့်စာပိုဒ်တိုများရှာဖွေပါ အနည်းဆုံး, ဖြစ်ရမည်, ရှိရမည်, နိုင်သူဖြစ်ရမည်, လိုအပ်, လိုအပ်သော, လိုအပ်, လိုအပ်ချက်များ, နှင့် အနည်းဆုံး. ဤသည်သောအရာကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုရှာဖွေသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်, အတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးအလုပ်ရရန်လိုအပ်နေပါသည်.
သငျသညျအလုပျအတှကျအရည်အချင်းများ၏ကောင်းတစ်ဦးနားလည်မှုရှိသည်သောအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်. သငျသညျမလျှောက်ထားမီသေချာသင်အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံပါစေ. သင်နားလည်ကြောင်းပြသခြင်းနှင့်ရာထူးများအတွက်အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်လျှင်, သငျသညျအင်တာဗျူးရဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်အလုပ်မရကြလိမ့်မည်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းလူတန်းစား ယူ. အလုပ်ခွင်အင်္ဂလိပ်